Ahoana ny fomba hampitomboana ferritin voajanahary? | Nutri Diet
Fausto Ramirez | | sakafo, fanampin-tsakafo
Ny lehilahy lehibe iray dia mila fatra 8 miligrama isan'andro hierro isan'andro, raha ny vehivavy lehibe kosa mila vy 19 miligrama isan'andro. Rehefa mihena ny habetsaky ny vy ao amin'ny vatana, ny fatra ferritin mihena koa ny vokarina. Mifanohitra amin'izany, rehefa mitombo ny habetsahan'ny vy dia mitombo koa ny famokarana ferritin. Mba hampitomboana ny ferritin dia ilaina ny mampitombo ny vy ao anaty vatana.
Ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny mampitombo ferritin mazava ho azy fa mihinana sakafo be vy. Ireto no tena lehibe: ny hena mena, akoho amam-borona, trondro, hazan-dranomasina, mamaky legioma, voankazo, voamaina.
Fa hampitombo ny ferritin, ny fihinanana sakafo manankarena amin'ny vy dia tsy ampy. Ilaina ihany koa ny mihinana sakafo izay manamora ny fifohana vy ao anaty vatana. Izany no antony, vitaminina C tokony ho singa lehibe amin'ny sakafo io. Betsaka ny sakafo manankarena vitamina C: laisoa, broccoli, dipoavatra, epinara, citrus, manga, frezy.
Misy koa ny sakafo manakana ny fitrohana vy ao amin'ny vatana. Izany no antony tokony hialana amin'ny fihinanana ireto sakafo manaraka ireto: kafe, ronono, dite, Coca Cola, persily, sakafo be fibre, sakafo be kalsioma.
Ny fiakarana voajanahary amin'ny ferritin dia tsy amin'ny alàlan'ny sakafo ihany. Misy tokoa ny sakafo mety hampihena ny fitanana ny vy ao anaty vatana, fa izany koa no izy stress.
Ny adin-tsaina dia mety hiteraka a hyperacidity na vavony vavony ary manakorontana ny fitrohana vy. Mba hiadiana amin'izany dia tsara ny manao yoga na misaintsaina. Ireo hetsika ireo dia mamela ny fandefasana ny fahefana ny vatana sy ny adin-tsaina ady.
Fa tsara fitrohana vy tsy ampy. Ilaina ny manaparitaka tsara ny vatana, ary io asimilasiôna io dia hohatsaraina amin'ny alàlan'ny fampihetseham-batana matetika. Mamela ny tsara voaray vy ny vatana dia tsy maintsy manana rà mandriaka tsara. Noho izany antony izany no nanolorana anao ho fampiharana a asa Fizìka isan'andro mandritra ny 20 minitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » fanampin-tsakafo » Ahoana ny fomba hampitomboana ferritin voajanahary?